Indlela yokutshintsha i-Charteral Canister
Iimoto neekhekhi Iimoto
Kwiimoto zanamhlanje, imodyuli yokulawula injini (ECM) yenza ngaphezu kokusebenzisa injini. Ukusebenzisa izixhobo ezininzi kunye ne-actuator, umsebenzi we-injini ye-ECM ukukhipha amandla amaninzi kuwo onke amaconsi amafutha. Ngaphandle kokuphucula umbane kunye nokusebenza ngokubanzi, oku kunciphisa ukukhutshwa kombane - injini esebenzayo ihlambulukile. Sekunjalo, kukho ukunciphisa ukukhutshwa kwamanzi kunokuba uphuhliso lwezoqoqosho.
Inkqubo yokulawula ukukhupha i-evaporative (EVAP) ilawula i-hydrocarbon (HC) yokukhupha, oko kukuthi, imiphunga yamanzi. Umtsalane we-charcoal yinxalenye ebalulekileyo yeprogram ye-EVAP, esebenzisana nezixhobo ezahlukeneyo, iinjini kunye neepavini zokuthintela umphunga wamanzi ukuba ungaphumeleli emoyeni. Ngaphambi kokukhanya kwelanga, ukuphuma kwe-HC kuthatha i-nitrogen oxides (NOx), okwenza i-ozone (O 3 ). I-ozone yomgangatho womhlaba ivuselela amaphemphu kunye namehlo kwaye liyinxalenye ebalulekileyo ye-smog. Ukukhutshwa okunjalo kuye kwadibaniswa neentlobo ezahlukeneyo zomdlavuza. Inkqubo ye-EVAP isebenzisa i-canister yokunciphisa ukukhutshwa kwe-HC ngexesha lokuphucula. Yintoni i-charter charter? Yintoni eyenza kwaye kutheni kubalulekile? Ekugqibeleni, uyifaka njani indawo?
Yintoni i-Charcoal Canister?
Ukukhutshwa kwe-Evaporative kuqhuma kakhulu kwixesha lokubuyisana, kodwa i-Charteral Canister iyanciphisa kakhulu. http://www.gettyimages.com/license/668193284
Umquba we-charcoal isitsha esitywinwe esigcwele "i-carbon activated" okanye "i-carbon activated coal". Ngokuxhomekeke kwindlela esilungiselelwe ngayo, igram enye ye-charcoal esebenzayo ingaba nommandla ophakathi kwe-500 m 2 no-1,500 m 2 (5,400 ft 2 ukuya ku-16,000 ft 2 ). (Ukuthelekisa, i-bill dollar igxile malunga negrama kwaye inommandla ongama-0.01 m 2 okanye i-0.11 ft 2 ).
Ukuthintela ukukhutshwa kwe-HC ephuma emoyeni, iiguvayi zilawula ukuhamba komoya ngaphakathi kwinqwelo ye-charcoal. Ngexa i-refueling, i-valver wind valve ivuleka, ivumela umoya nomoya wamapuphu ukuba aqhube kwi-doister ukuya emoyeni. Ikhabhoni esebenzayo ibamba umoya womoya. Emva kwe-refueling, i-valve valver valve ivala, isisindile inkqubo.
Ngaphantsi kweemeko ezithile zokusebenza, njenge-low-load traffic cruising, i-ECM iya kulawula ukuhlanjululwa kwesikhombisi kunye nokuvulwa kwamagatya okuvula. Njengoko injini iyidonsa umoya ngombhobho wamalahle, amafutha epetroli aphuma, atshiswe kwinjini. Ngenxa yoko, ukuchithwa kwe-HC kwonakalisa kakhulu, kuthatyathwa yingozi engabonakaliyo ye-carbon dioxide kunye namanzi (i-CO 2 ne-H 2 O) umphunga ekugqibeleni.
Kutheni ufuna ukufaka indawo yeColoral Canister?
I-"Hlola iinjineli" UkuKhanya kunokubonisa iNgxaki yokuThengisa uMlilo. Ifoto © Aaron Gold
Kukho ubuncinane izizathu ezinokuba ungadinga ukuzenza esikhundleni somgcini. Izibonakaliso onokuzibona ezivela kwintsimbi engafanelekiyo yombane ingabandakanya ukukhanya kweenjini (CEL), ubunzima bokufakelwa kweenjini, ukusebenza kweenjini ezingekho kakuhle, ukuvutha komlilo ogqithiseleyo, okanye ukunciphisa uqoqosho lwamafutha.
Hlola ukuKhanya kweeNjini - Ii-DTC ezimbalwa (iikhowudi zeengxaki zokuxilonga) zingabonisa ukutshintshwa kwesikhombi, ngokuqhelekileyo ukuvuza kwe-EVAP - i-ECM ihlola ukuthembeka kwe-EVAP ngokuqhuba uvavanyo lwexinzelelo-okanye i-valve, ingcinezelo, okanye iingxaki zokuhamba. Umgqomo oqhekekileyo we-charcoal canist unokuvuza, ubeke enye okanye ngaphezulu kwe-DTC. I-valve ephosakeleyo inokubangela ukuhamba okanye i-DTC yesiphaluka, kodwa ukutshintshwa kwesikhombi kunokuba yindlela kuphela ukuba i-valve ayifumaneki ngokwahlukileyo.
Iingxaki zeRefueling - Iyona nto ibangela ukuba i-refueling ingxaki i-valves ephosakeleyo, kodwa ingabangela ukuba i-canister yombane egcweleyo. Isizathu esona siqhelekileyo sokugungqa i-canister sigxininisa ngokuphindaphindiweyo itanki, okanye "ukucima" emva kokuba umbhobho wepompoli ushicile. Xa i-canister izaliswe, umoya awuqhubeki ngokukhawuleza, ukusekela inkqubo yombane kunye nokuchofoza umbhobho we-fuel ngaphambi kokuba itanki igcwale. I-saturity saturation ivame ukukhokelela kwiingxaki ezivuthayo ze-mafutha, njengoko zingenakufumana umphunga ophezulu wamafutha, kwaye ukujikeleza ngokuphindaphindiweyo akukwazi ukususa i-fuel "emanzi".
Ezinye iingxaki - Uqoqosho olusweleyo oluninzi okanye ukusebenza kweenjini nakho kunokubangelwa ngumqhubi womlilo olahlekileyo, kwakhona ngenxa yokugcwalisa. I-canister ephuliweyo inokuvumela ukuba uthuli lomlilo lubaleke emigqeni yomphunga, ukuvala i-purge okanye i-valves valve. Umxube ogcweleyo unokubangela umxube weoli ogqithiseleyo kunjini, obangela iingxaki eziqhubayo.
I-Charter Canister ingaba phantsi kweCar, kufuphi neTelen Tank. http://www.gettyimages.com/license/547435766
Emva kokuba uzimisele ukuba umbane we-charcoal ube ngumthombo weengxaki zakho, ukutshintshwa kuyinto elula yokunqamula ukuxhuma izixhobo kunye nezixhumi zombane, ukutshintshela i-canister, nokubuyisela yonke into.
I-canister ingaba phantsi kweyododa okanye kufuphi ne-tank fuel. Ukuba kufuneka uphakamise isithuthi, sebenzisa i-jack imile - ungayifaki nayiphi na inxalenye yomzimba wakho phantsi kwesithuthi esixhaswa kuphela yi-jack.
Umbane, umphunga kunye nokuxhunyaniswa kombane kungenzeka ukuba awuthathanga iminyaka emininzi. Ukucoca iintonga kunye ne-bolts ngeoli engenelayo ukuze unciphise ukususwa. Kwakhona, abanye baye bafumana i-lubricant lubricant benefit in removing lines and electrical lines.
Susa zonke iifowuni ze-hose kunye nokunqamula yonke imigca yomphunga. Sebenzisa umakishi wepeyin okanye u-masking tape ukukunceda ukhumbule apho baxhuma khona. Unqamle nayiphi na idibaniselwano yombane.
Ukukhupha isitya se-charter ngokuvamile sidinga kuphela izixhobo zendlela ezisisiseko , ezifana ne-ratchet kunye nesetekethi. Ukuba i-rust ingxaki, isando kunye ne-punch zingase zifikeleleke ukuphazamisa i-nut okanye i-bolt ekhululekile. Gqoka iziglasi zokukhusela ukukhusela ukungcola okanye ukugquma ukungena emehlweni akho.
Xa ususa umgqomo, ukuba uyaphawula uthuli lomsila kumgca we-EVAP, kufuneka uqhube umgca womoya ocinezelekileyo ukukhusela ukuba ungagcini i-valve ye-purige kwaye udale enye ingxaki phantsi kwendlela.
I-Bolt i-canister entsha isendaweni, ke sebenzisa inani elincinci le-silicone ye-spray kumgca womoya kunye nokuxhuma kombane. Oku kuya kunceda ukufakela ukufakela nokuqinisekisa ubungqina obuninzi.
Ukuba ukutshintsha i-canister ukulungisa imeko ye-CEL, cima zonke i-DTC phambi kokuqalisa kwakhona isithuthi.
Ukutshintshwa komgca we-charcoal akuwona msebenzi onzima kakhulu, kodwa ukugqiba ukuba i-canister yinto ephosakeleyo inokuphazamiseka. Ukuba awukho i-100% eqinisekisiweyo yokuba i-canister iphosakele, qhagamshelana nabaqeqeshi ukucacisa imbangela yengxaki ojongene nayo. Oku kuyinyani ngokukhethekileyo ukufumana ukuvuza kwe-EVAP, okungenakukwazi ukufumana ngaphandle komshini wokubhema, kubiza kakhulu kwi-DIYer.
Iimpawu zeGreyket Head Headlight
Amazwi amancinci angama-International Harvester Scout
Iimoto ezitsha eziqhelekileyo Ngaphantsi kwama-$ 100k
Indlela yokuguqula amatya
Ininzi ethembekileyo iCrossovers esetyenzisiweyo kwiMakethe
Imbali emfutshane yeRoush Mustang
Iingoma eziphezulu ze-Rap Rap ze-90s
Iimpawu ezivela 'kwiNcwadana'
Indlela yokusebenzisa igama lesiFrentshi elithi Du Tout
U-Isabella II waseSpeyin: UMlawuli oPhikisanayo
Ukutyelela kwiNtaba yaseSharktooth
IsiTshayina Mahayana Sutras
Indlela yokuyeka ukuHlola iingxaki kunye neeprojekthi
Amathuba okudlala kwiMonopoly yeMidlalo
Ngaba Unayo Imali Kangakanani Ukufuna uMongameli?
Iintlobo zeDatha zeDatha eDelphi
IJografi yaseMzantsi Korea
14 Amanqwanqwa Aphakathi Awakwaziyo Akhoyo